Diyaarada Djibouti oo duulimaadyo ka bilaabi doonta Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDiyaarada Djibouti oo duulimaadyo ka bilaabi doonta Garoowe
December 18, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarada Djibouti ayaa duulimaadyo ka bilaabi doonta garoonka diyaaradaha ee Garoowe, sida ay sheegtay.
Diyaarada oo ay leedahay dowladda Jabuuti ayaa asbuuciiba labo duulimaad ka bilaabi doonta Garoowe dabayaaqada bishan December, sida ay ku sheegtay boggeeda Facebook.
Waxay ku biiri doontaa diyaaradaha kale ee gobolka gaar ahaan Ethiopian Airlines oo horey duulimaadyo uga bilowday Garoowe, caasimada Puntland.
Garoonka diyaaradaha Garoowe oo dhawaan la dhisay ayaa soo jiitay duulimaadyo kala duwan oo gudaha iyo dibada ah, oo xoojiyay isku xirka socdaalka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa markale dib u dhac kuyimid, sida uu shalay gelinkii dambe sheegay guddoomiyaha doorashada dadban ee Soomaaliya. Guddoomiye Cumar Maxamed Cabdulle sidoo kale loo yaqaan Cumar Dhagey ayaa sheegay in doorashadu [...]